गाडी गड्याङग गुडुङ गर्दै भिरबाट खस्यो, त्रिशुलीमा पौडी खेलेर बाहिर निस्किँए, श्रीमती र छोरीलाई निकाल्न सकिन - Onlinenews Global
By laxmi May 16, 2021
गाडी गड्याङग गुडुङ गर्दै भिरबाट खस्यो, त्रिशुलीमा पौडी खेलेर बाहिर निस्किँए, श्रीमती र छोरीलाई निकाल्न सकिन छोरी जेनिसाको केही समय अगाडि पत्थरीको अप्रेसन गरिएको थियो । तर अप्रेसन गरेको ठाउँमा इन्फेक्सन भएर थप उपचार गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि घर परिवारमा सल्लाह गरेर काठमाडौं जाने निधो गर्यौं । हिजो साँझ लु.१ च. ९७३१ नम्बरको जिपमा म, छोरी जेनिसा र श्रीमती जमुना काठमाडौंका लागि हिँड्यौँ । जिप चालक सूर्य केसी थिए ।यात्रा राम्रैसँग चलेको थियो । बिहानीपख निद्राले अलि झकाएको थिएँ । एक्कासी छोरी र श्रीमती चिच्याए । आँखा खोल्दा गाडी गड्याङग गुडुङ गर्दै भिरबाट खस्यो र त्रिशुलीमा पुग्यो।
किशोरी छोरीको पेटमा कसको बस्यो गर्भ? बाबुले बिर�...
मेरो बारेमा भ्र’मित फैलाउने काम नगर्नु होला कुल...